China Air Multi-piston Ukubumbela Machine mveliso kunye nabathengisi | Sofiq
Lo matshini usetyenziselwa indawo yokuphosa isiseko, imigca yemveliso yoomatshini okanye imigca yemveliso esetyenziswayo kwaye ilungele imveliso yebhetshi yepleyiti encinci yokubumba ipleyiti enye ejongene nayo kunye nemowudi yebhokisi enye, ibhokisi ephezulu kunye nebhokisi ezantsi ezenziweyo. ngokucofa ulwakhiwo, ucinezele isilinda ububanzi, amandla okucinezela olomeleleyo kulungile ekubunjweni komgangatho, umbhobho womoya olula, ulawulo olulula kunye nokulula.
A.Umxokelelwane womoya wokunxibelelana okuninzi wenziwa ukwandiswa koyilo lomatshini, ngaphandle kokuvuza kweoyile; ukumodareyitha uxinzelelo oluthile, akukho zidingo zikhethekileyo zesanti, abafowunelwa abangaphezulu kokuxinana (48pcs), ezifanelekileyo ekubumbeni okunzima.
Ukuxinzezeleka koxinzelelo oluphezulu, ukudibana okuninzi kudibanisa ukubumba kwesanti, kwaye kungcangcazela ngetafile yokusebenza (eyahlulwe kwisakhelo somatshini, kunye nesakhelo ngaphandle kwentshukumo). Ke ngoko, ukungcangcazela, ukusebenza kokuqina okuphezulu kunye nokubumba okufanayo kwesanti (ubunzima bokulinganisa i-85 ~ 90, uhlobo lokuqina kobunzima be-B), ukusetyenziswa kwesanti kunokuba kuncinci njenge-20 ~ 30 mm, umlinganiso wokuxinana ufike ku-4.2, kunye nomphezulu othe nkqo Ubulukhuni kwisisu sokubumba sinokufikelela ngaphezulu kwe-HB80.
C Umatshini wamkela inkqubo yokuxinana kwentshukumo encinci, ukungqinelana okukhulu kwesilinda, amandla oxinzelelo oluphezulu, ukubumbana kunye nokubumba kwesanti, oko kungaqinisekisa umgangatho wokuphosa.Ukubumba ubume bendlela intonga yokuqhagamshela, ulwakhiwo lwe-shaft ehambelanayo, uxinzelelo lwesantya seoyile, ulungelelwaniso oluhle lokususa ukungqamanisa, uyaqonda umzobo ozinzileyo ziisilinda ezimbini zokuphakamisa, intonga yokuqhagamshela, kunye neshafti ehambelanayo. Umbhobho olula womoya, umsebenzi olula kunye nobhetyebhetye, ukusebenza okufanelekileyo, Umatshini wamkela intwasahlobo ephefumlelweyo yomoya wendlela encinci yentshukumo, akukho mfuneko yesiseko ikhethekileyo.
D. Umatshini unyusa ukubetha kwesilinda yokuxinana, yamkela iindlela ezininzi zokunyusa amandla oxinzelelo, kwaye ngaxeshanye, inokucinezela kwaye inyikime ngokweemfuno zokwenyani, ukuze ukuphakama kunye nokuqina kwendiza yohlobo lwesanti (kubandakanya Uhlobo lwesanti yokubumba entsonkothileyo) zihambelana kwaye zilingene. Umsebenzi olungileyo kunye nemveliso ephezulu.
E.Umbumbulu wentlabathi eyahlulayo ithululela ukugitywa kodonga olucekeceke, ubungakanani obuchanekileyo, umphezulu ogudileyo wemveliso.
Egqithileyo Uxinzelelo lweStatic Molding Line
Okulandelayo: Uxinzelelo lwe-Static Pressu Automatic Machine
Esingxobeni Ukubumbela, Ibhokisi yesanti, Flask zomngundo Machine, Semi-oluzenzekelayo Umatshini Ukubumbela, Ukubumba Ivoti Flask, Umatshini wokukroba ngaphandle,